Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Farriin u Diray Saraakiisha Ciidanka – Radio Daljir
Agoosto 4, 2017 8:15 b 0
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Taliyeyaasha Ciidamada ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan mideynta Ciidamada Dowladda ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo gobolada dalka.
Waxa uu sheegay maalmahan in ay jirto kala shaki iyo khilaaf soo kala dhexgalay Ciidamada Dowladda, taasina aysan aheyn mid wanaagsan, masuuliyadeena ay dusha saaran doonaan Taliyeyaasha Ciidamada.
Khayre ayaa yiri “Ciidanka Qalabka Sida taariikh fac weyn bey dalka ku leeyihiin, waxaadna huwan tihiin qaranimada iyo sharafta dalka, maadaama aad raadineysaan Soomaalinimo iyo inaad dalkaan xoreysaan, waxaana arrintaasi ku qaban kartaan inaad tihiin Soomaali, Taliyeyaasha halkan fadhida idinka ayaa la idinka rabaa inaad isku soo dhaweysaan ciidamada”.
Sidoo kale Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada Qalabka Sida ku ammaanay Xasilinta Dalka kuna dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan doorkooda soo celinta Amniga, Xasilinta iyo Nabadeynta Dalka.
Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mararka qaar waxa uu isku dhacyo ku dhexmaraa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka, waxaana ugu dambeysay iska hor imaadkii dhowaan Muqdisho ku dhexmaray Ciidamo Nabad Sugid ah iyo kuwo Millitariga ka tirsan, halkaasi waxaa ku geeryooday Taliye ku xigeenkii hore ee Nabad Sugidda gobolka Banaadir iyo Afar ka mid ah ilaaladiisa.
Alshabaab oo Fariisimo Laga Saaray iyo Saraakiil Looga Qabtay Galgala (AKHRI)